Nika iinwele zakho zeHenna eziPhambili kwaye uzikhumbule iGrey yakho
Gubungela iinwele zakho ezimpunga nge-henna yemvelo
I-Henna iyinkozo eyenziwe ngamagqabi omisiwe we-Lawsonia plant inermis. I-Lawsonia inermis shrub nayo ibizwa ngokuba yi- Mehendi okanye isityalo se-henna. I-Henna powder isetyenziselwa ukudala idayi yomdaka omanzi ongasetyenziselwa ubugcisa bomzimba (tattoos zesikhashana) kunye nokubala imibala yakho ngokwemvelo ngaphandle kweemichiza ezinobuthi ezifana ne-ammonia okanye i-peroxide.
Mayelana neNzendalo zeHenna Hair Products
Ukukhanya kweNtaba yeeNwele eziMnyama kunye noMququzeleli. (c) Phylameana lila Desy
Kule titshala yembala yendalo, umkhiqizo we-henna usetyenziswe umbala wombala we-Light Mountain kunye ne-conditioner yeenwele ezibomvu ezimhlophe. Ngaphakathi kwebhokisi yipakethi ye-ounce ye-100 yeeplastiki yombala weenwele ezisihlambulukileyo, umxube we-Lawsonia ekhulayo e-inermis kunye ne-Indigoferae tinctoria. Imiyalelo ecacileyo yokuvavanya uvavanyo, ukuhlolwa kwe-strand, kunye nesicelo kufakiwe, kunye neeseyile zeglastiki kunye ne-cap. Ukukhanya kweNtaba yeNdalo inikeza uluhlu lwemibala yeenwele ezikhethiweyo ukuze ukhethe ukubandakanya ukungathathi hlangothi, i-reds, i-browns, kunye ne-gray, kunye nomnyama.
Ukudala Imiphumo ekhethekileyo yokuBhala kweeNwele
IHenna kunye nokuThuthukisa izithako. (c) Phylameana lila Desy
Yenza umdlalo ozonwaba ngee-add-ons ezokukunceda ukuba wenze umbala wakho oyingqayizivele womntu we-henna. I-Henna ayiyikukhanyisa umbala wakho weenwele. Nangona kunjalo, ukuba iinwele zakho zikhanya ngokuqhelekileyo njenge-ash blonde okanye i-brown brown, ungongeza into enomthi njengejisi lemon okanye iviniga ukuze unike iinwele zakho zibe ziigqabileyo zegolide okanye zethusi. Ukudibanisa kwezinye i-yogurt esicacileyo okanye iqanda eliluhlaza liya kukhangela kakhulu inwele zakho. Ungongeza kwakhona iziqholo ezahlukeneyo ekhitshini lakho ukwenzela ukuphucula ii-hues ezibomvu. Khetha kwi-nutmeg, isinamon, i-allspice, i-paprika, okanye i-ginger.
Ukuxuba i-Henna Hair Treatment
Umxube weHunna Hair Coloring (uHenna goop!). (c) Phylameana lila Desy
Beka eceleni i-ounces ezi-12 ukuya kwi-16 zamanzi abilisiwe. Phakamisa naziphi na izilwanyana (ukuba zikhona) ukusuka kwikhompu yakho ye-henna. Gxila kwi-add-ins yakho (yogurt okanye iqanda, iziqholo, ijusi lemon okanye iviniga) kwi powder eyomileyo. Yongeza amanzi afudumele, encinci ngexesha kwaye udibanise kakuhle. Sebenzisa amanzi okwaneleyo ukuze i-henna yakho idibeneyo yinto engaguqukiyo, kodwa kungekhona amazambane anamaqatha. Beka ishidi leplastiki ekugqibeleni ngokuthe ngqo kwi-henna unamathela, ukuqinisekisa ukuba akukho okanye umoya omncinci uyomisa. Vumela ukuba ubeke kwiqondo lokushisa lokubanda ngeeyure ezintathu.
Ngelixa ulinde i-henna unamathela ukusetha, hlawula iincwele zakho. Gcoba izinwele zakho kakuhle. Ungayisebenzisi nayiphi na imeko esilandelayo emva kwe-shampoo yakho. Ufuna iinwele zakho zibe yikhemikhali ekhululekile. Ithawula ithile izinwele zakho.
Xa ulungele, sebenzisa unamathisele kwicandelo kuzo zonke iinwele zakho ukusuka kwiingcambu ukuya ekupheleni. Gubungela iinwele zakho ngeplastiki kwaye ulinde malunga nemizuzu engama-45-60. Ungasebenzisa umsi womlilo xa unqwenela ukuncedisa idayi kwizinwele zakho, qaphela ukuba ungagqithisi kwaye unyibilike.
Hlanganisa i-henna goo kakuhle ngamanzi. Ithawula ityhile iinwele zakho ezandula. Musa ukuhlambalaza ubuncinane ubuncinane iiyure ezingama-24.
Inqaku: Inkunkuma yeHenna, ngoko qiniseka ukuba ugqoke iiglavu zeplastiki. Kukho bulumko ukuba usebenzise ioli yepetroleum kunye neenwele zokukhusela ubuso bakho, indlebe kunye nentamo ukuphuma kwi-discoloration. Kulungile ukuba ufumana uncibiliko oluswini lolusu. Gcina kwi-scalp yakho kunye nekhumba akufanele uhlale ngaphezu kweentsuku okanye ezimbini. Idayi kwizinwele zakho kufuneka ihlale iiveki ezine ukuya ezintandathu.
Ngaphambili nangemva kweefoto
Ngaphambi nangemva kweNyunya Yobuninzi beNwele yeHenna. (c) uJoe Desy
Ezi ngaphambi nangemva kweefoto zibonisa iziphumo zonyango lwe-henna kunye ne-yogurt, i-sinam, kunye nejisi lemon. I-henna ayizange yenze utshintsho olukhulu. Kodwa, kwazisa iziqwenga ezibomvu kunye nomzimba owongezelelweyo. IinguHenna iingubo zonke zeenwele ezenza intloko yeenwele ibonakale kwaye ivakale. Into ongenakuyibona kwiifoto "ukuvumba" kule nyathelo yonyango lwendalo. Ayikho iphunga lemichiza! Endaweni yoko, iphunga lifana kakhulu neengca ezixutywa ngokutsha okanye ukuvumba kwefayi egcinwe kwingqolowa. Akukho nkxalabo, iphunga liyakuthi lihlale lijikeleze emva kwee-shampoos ezimbalwa. Nangona kunjalo, i-henna yimibala engunaphakade kwaye iza kuhlamba ekugqibeleni. Ngoko ke, iincwadana ezimbalwa, ixesha elide umbala wakho uya kuhlala.
Ukubala imibala yakho kunye neGrey kunye neHenna
Ngaphambi nangemva kweNyango yokuBhala imibala yeHenna. (c) uJoe Desy
Kwinqanaba elidlulileyo, kukho isithombe sesemva kwentloko apho ndinemiqolo embalwa ekhula khona. Iigrays zam "i-crone" ezibonakalayo zibonakala zihamba kunye kunye neenwele ezijikeleze ubuso bam. Olu unyango lwezinwele ze-henna luguqulwe isilivere kunye nama-grays afake kwiindawo ezivuthayo zomlilo. Ukuba awuyithandi imbono yokuba neebomvu ezibomvu ukubethelwa kwakho kukugqithisa ukuba uhlale ucacile kwi-henna. Ngokuba i-brunettes efuna ukugubungela ama-grays abo ngokwemvelo, enye ingubo engombala obomvu ingaba kukhangela i-clove okanye i-conditioner yezinwele ze-walnut.
Dye i-Grays Yakho
Iinqununu zeHenna zindlela engokwemvelo yokutsala ama-grays akho. I-Henna yidayi esekelwe kwisityalo esingenayo iikhemikhali ezimazayo. Unokukhetha kwindlela yokunyusa iinwele ze-henna okanye i-henna ezongeziweyo i-shampoos ukuze unike iinwele zakho ngakumbi umzimba kwaye zikhanyise ngakumbi. I-Henna yindlela engcono kumntu ofuna ukuhlala kwindlela yendalo, kodwa uthanda umbono wokuhamba ngokukhawuleza.
I-Fire Firey Orange Henna Umbala kunye noLondolozo lwe-Indigo Treatment
nevenmn / Getty Izithombe
I-Indigo esetyenziselwa ukunyuka kweenwele ze-henna iya kukunika i-auburn ecebileyo, i-shades ebomvu okanye inwele. Emva kokuba ugcine indigo yakho unamathele kwizinwele zakho, iifwele zakho ziya kukhanya. Esi sisisombululo esikhulu ukuba awuyithandi i-orange evuthayo enokubangela ukuphathwa kweenwele ezimnyama nge-henna.
Isilumkiso: Musa ukubeka indigo zakho iinwele ngaphandle kokuqala unyango lwe-henna. Ukuba ndiza kufaka i-indigo kwizinwele zam ezibomvu zamantombazana (loo nto, intombi eluhlaza imva ngathi i-oxymoron!) Ndiza kugqiba ngeenwele eziluhlaza. Hayi enkosi!
Hlanganisa i-1/2 indebe ye-hairer conditioner kunye ne-1 ukuya kwe-1 kunye neespuniki zeesityikiti ze-indigo powder uze uvumele ukusetha imizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu. Kuya kuba ngumxube omncinci wokunamathisela. Faka isicelo kwiiglavu kwisiqhelo se-orangey yeekhiye zakho zangaphambili ze-henna ezifunyenwe ukuba unqande. Gubungela ngeplastiki. Vumela ukusetha imizuzu eyi-15 yokutshabalalisa, imizuzu engama-20-50 emdaka, kunye neyure okanye ngaphezulu kweenwele ezimnyama. Imizuzu engamashumi amabini inamba yam magic kwiinwele ezizinzileyo ezinobunandi obunobomi obubomvu. Hlulela ngokugqibeleleyo. Izinwele ezinqabileyo zincinci kunye nethawula kwaye zivumele ukuba iinwele zakho zome ngokwemvelo (gwema ukusebenzisa i-dryer eyomileyo, ukufudumala okomileyo kubangela obomvu obuninzi). Musa ukuhlamba iinwele zakho ubuncinane ngeeyure ezingama-48, ukuvumela i-indigo ukuba idibanise.
Iphulo: Kucetyiswa ukuba iinguqu ezininzi zetyukliya zingongezwa kwi-indigo yokunamathisela ngaphambi kokuba ufake isicelo kwizinwele zakho ukuba ufumene iinwele zakho azifumani umbala kakuhle. Andizange ndibe nalo mbandela, kodwa mhlawumbi le ngcebiso iya kunceda umntu.
Iimpawu zeSewing Sewing
Ukukhawuleza kweJografi Iinkcukacha ngeCanada
I-Biography kaRichard Morris Hunt
Umbhangqwana Obudlelwane bezobuhlanga kwiimiboniso zeTV kwi-20 leminyaka
I-MALDONADO Igama lomnini igama kunye nomthombo
10 Best Spider-Man Stories Krisimesi
Iimpawu eziqabulayo malunga nezidumbu zezilwanyana